गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि सर्वत्र विरोध, के गर्लान अब प्रधानमन्त्रीले ? – सजल सन्देश
गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि सर्वत्र विरोध, के गर्लान अब प्रधानमन्त्रीले ?
By Sajal sandesh	 On६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १२:०१
काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको बहिगर्मनप्रति नागरिकस्तरमा चासो र चर्चा भइरहेको छ।
राम्रो काम गरेर नागरिक प्रशंसा बटुलेका विष्टलाई हटाएर सार्वजनिक दृश्यमा नभएका लो प्रोफाइलका रामेश्‍वर राय यादवलाई ल्याइएको छ। मधेसवादी दलमा क्रियाशिल रहेका यादव केही वर्ष अघि मात्र तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। कमजोर पात्रलाई मन्‍त्री बनाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रँजाइ गर्दै आएको गिरोहलाई चलखेल गर्न अब सजिलो भएको छ।
मन्त्रीहरुले सपथ खाएको २४ घण्टा नबित्दै नेकपाभित्र लफ’डा